स्थायी कमिटीको निर्देशन प्रदेश संसदीय दलद्वारा अवज्ञा – Nepal Japan
स्थायी कमिटीको निर्देशन प्रदेश संसदीय दलद्वारा अवज्ञा
सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको निर्देशन
नेपाल जापान १२ जेष्ठ २३:०१
नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको निर्णय प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । एमालेको स्थायी कमिटीले सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।
अहिले तत्कालका लागि कोभिडलगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय स्थायी कमिटीको निर्णय परिपक्व नभएको र हालसम्म आधिकारिक रूपमा नआएको बताउनुभयो । साथै हालसम्म प्रदेश सरकारविरुद्धको लडाइँमा रहेको र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा रहेकाले सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीय दलले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि सो पार्टीको प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटीले निर्देशन दिएको दुई दिनपछि एमाले प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहित मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र दिएको छ । प्रमुख सचेतक तामाङलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी सबै एमालेबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपाल समूहका हुनुहुन्छ ।
एमाले प्रदेश कमिटीले तिनै मन्त्रीलाई फिर्ता भएर एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सचेतकसहित तिनै मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाउनुभएको हो । एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशनसहित पत्र दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
बल्ल बन्यो मधेश प्रदेश
प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुर
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य प्रगति : नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा विश्वमा १ सय १७ औं स्थानमा
११ माघ १५:४५
११ माघ १५:०२
११ माघ १४:५२
मुलुक सफल राष्ट्रमा परिणत नहोस्
११ माघ १३:४९
व्यापक उपायहरू अपनाए कोभिड–१९ महामारी २०२२ मा अन्त्य हुनसक्छ
११ माघ १३:०८
३. जब कान्छो छोराको सासुसंग प्रेम बस्यो…
४. अठार हजार नेपालीका राहदानीको विवरण इन्टरपोलमा
६. श्रीमतीको हत्या गरी घरभित्र पुरेर हराएको सूचना दिने श्रीमान